Lin Lin Nail Art & Body Spa | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Lin Lin Nail Art & Body Spa | Sanchaung
Lin Lin Nail Art & Body Spa
Hair Saloon / Nail / Beauty Others
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင်သည် ယခုချိန်တွင် အမျိူးသမီးများကြားတွင် လူသိများလာသော ဆိ်ုင်တစ်ဆိ်ုင်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ တည်နေရာလေးကတော့ အမှတ်-၆၅ ၊ မင်္ဂလာလမ်း ၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်မှာ အဓိက၀န်ဆောင်မှုများကတော့ ခြေထောက်နှိပ်နယ်ပေးခြင်း ၊ ကိ်ုယ်ခန္ဓာချေးချွတ်ခြင်း ၊ ဆံပင်အရောင်ဆိုးခြင်း ၊ ဆံပင်ညှပ်ခြင်း များနှင့် လက်သည်း ၊ ခြေသည်းများကို အရည်အသွေးမှီသော ဂျယ်များဖြင့် ဒီဇိုင်းအလှပြင်ဆင်ခြင်းများကို စိတ်တိုင်းကျ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော ဆိုင်တစ်ဆိ်ုင်ဖြစ်ပါသည်။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင်တွင် ၀န်ဆောင်မှုပေးသော ၀န်ထမ်းများမှာ မြန်မာလူမျိူးများဖြစ်သော်လည်း အတွေ့အကြုံရင့်သော ၀န်ဆောင်မှုများကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှု ရရှိစေသော ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိ်ုင်အပြင်အဆင်မှာတော့ အပြင်ပန်းတွင် ပန်းများဖြင့် အလှဆင်ထားပြီး အတွင်းပိုင်းတွင်တော့ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းမှုနှင့် တကွ ခေတ်မှီသော အပြင်အဆင်များကြောင့် ဆိုင်ထဲကို ၀င်လိုက်တာနှင့် စိတ်အေးချမ်းမှု ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိ်ုင်သည် ကျယ်ဝန်းသော ဧရိယာရှိပြီး ဆိ်ုင်ရှေ့တွင် ကားရပ်နားရန် အဆင်ပြေသောကြောင့် ဆိုင်ကို လာရောက်သော ပြင်ဆင်သူများ၏ ကားများ ရပ်နားရန်အတွက် အဆင်ပြေပါသည်။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင်တွင် ပြင်ဆင်သော ကုန်ကျစရိတ်များမှာလည်း သင့်တင့်သောကြောင့် လူတန်းစားမရွေး ပြင်ဆင်နိ်ုင်သော ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လက်သည်း ၊ ခြေသည်း များသာမက အမျိူးသမီးများအတွက် စိတ်တိုင်းကျ ၀န်ဆောင်မှု ပေးသော ဆိ်ုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်းများမှာလည်း ၀င်လာသူများအား သွက်လက်မြန်ဆန်သော ၀န်ဆောင်မှုများနှင့် စိတ်ရှည်စွာဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
Lin Lin Nail Art & Body Spa ဆိုင်ရဲ့ ဆိ်ုင်ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် ၉ နာရီမှ ည ၉ နာရီထိ ပိတ်ရက်မရှိ ဖွင့်လှစ်သောကြောင့် အချိန် မအားလပ်သူများ အတွက် အဆင်ပြေစေသော ဆိုင်တစ်ဆိ်ုင် ဖြစ်ပါသည်။
Hair Saloon | Nail | Beauty Others
No 65, Mingalar Street, Sanchaung Township, Yangon
Lin Lin Nail Art & Body Spa is one of the well-known beauty salon in Yangon which is located at No.65, Mingalar Street, Sanchaung Township. The main services for these salon is foot massage, body scrub, body spa, Hair cutting, hair coloring, hair treatment and they used the various kinds of gel with new style creation for the nail and Polish Nail. They only have local stylist but their services and creations are excellent. The owner decorated the salon with nicely and inside decoration is modernized with air con, well this would beaperfect place if you are someone who loves peacefulness and calmness. Especially, the price also reasonable and it is very suitable for various kinds of people who like to prepare their nail and body. The opening hour of the salon is from9AM to9PM. So, it is one of the best beauty salon in Yangon.
Eve Hair Design & Beauty Spa
Massage , Spa, Nail
Total Fitness (Sanchaung)
Face & Body Beauty Center